नेपाली साहित्यमा अहिले निकै नै प्रगति र उन्नति भएको छ | Kavyakunja
नेपाली साहित्यमा अहिले निकै नै प्रगति र उन्नति भएको छ
November 18, 2013 |
‘मैले कविता लेखेर जति आनन्द पाएँ । त्यो अरू कुनै काम र कुरामा पनि पाइनँ ।’
- पेशल आचार्य, साहित्यकार
(२०२३ साल साउन १५ मा मोरङ, विराटनगरमा पिता श्याम आचार्य र माता शोभा आचार्यका तीन भाइ छोराहरूमध्ये जेठा छोराका रूपमा जन्मनु भएका पेशल आचार्य रामेछाप जिल्लाका पुराना भाषा शिक्षक र क्रियाशील कवि, निबन्धकार, भूमिकाकार र कथाकार हुनुहुन्छ । कथा, कविता, निबन्ध सबै विधाका गरी करिब ३० वटा कृतिका स्रष्टा आचार्यका प्रकाशित मौलिक पुस्तक भने कविता, कथा र निबन्ध गरी ३ थान र सम्पादित कृतिहरू ८ थान रहेका छन् । आचार्यले रामेछाप जिल्लाबाट निस्कने रामेछाप नयन साप्ताहिक, रामेछाप साप्ताहिक, कर्मचारी मिलन केन्द्रका स्मारिका, शिक्षक संघसंस्थाका स्मारिका, विद्यालय तथा क्याम्पसका अभ्यास शिक्षण निर्देशिका र विभिन्न साहित्यिक पत्रपत्रिकाहरू पनि सम्पादन गर्नु भएको छ । अहिलेसम्मको साहित्यिक गतिविधिमा लागेबापत राष्ट्रिय स्तरका ३ वटा पुरस्कार र अब्बल शिक्षण गरेबापत २०६८ सालमा नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय शिक्षा पुस्कारबाट समेत विभुषित हुनु हुने युवा साहित्यकार पेशल आचार्यसँग साहित्यकार प्रभु विवशले गर्नु भएको समसामयिक साहित्यिक एवं रागात्मक कुराकानीको सार संक्षेप । –सम्पादक)
१. वर्तमान नेपाली साहित्यलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
उत्तर ः नेपाली साहित्यको अहिले निकै नै प्रगति र उन्नति भएको देखेको छु । यो मेरा लागि र सम्पूर्ण नेपाली साहित्यका पाठकका लागि खुसीको कुरा हो । यो माहौलमा अरू केही कुराहरू पनि आएका छन् । अहिले नेपाली साहित्यमा गजलको एक प्रकारले बाढी नै आएको छ । गजलको यो बाढीमा निकै उत्साह त छँदैछ तर यसमा माछा मात्र छैनन् । चेपागाँडा र भ्यागुताहरू पनि छन् । कथा र उपन्यास लेखनले पनि आशातीत मात्रामा गति पक्रेको छ । कविताको पनि निकै उच्च स्वर सुनिएको छ । नेपाली भूमिमा रहेर लेखिएका नेपाली साहित्यभन्दा कविताका हकमा नेपाल बाहिरबाट लेखिएका कविताहरू ‘बोल्ड’ पाराका छन् ।
२. यहाँका कति कृति प्रकाशन भएका छन् र भावी कृति प्रकाशनबारे योजना के छ ?
उत्तरः मेरा अहिलेसम्म तीनवटा कृतिमात्र प्रकाशनमा आएका छन् । प्रसङ्गले मेरा बाल साहित्यका कृतिहरू प्रकाशनमा आए पनि म बाल साहित्यकारभन्दा प्रौढ साहित्य लेख्ने ‘मेन स्ट्रिम’ को एक साहित्यकार हूँ । मलाई आफू निबन्धकार, कवि, कथाकार, गीतकार, व्यङ्ग्यकार र मुक्तककार हूँ जस्तो लाग्छ । हुन त मैले २ वर्ष अगाडि २ वटा गीतसङ्ग्रह पनि लेखेको छु । मेरा २ वटा प्रौढ कथासङ्ग्रह, ३ थान उपन्यास, ७ वटा कवितासङ्ग्रह, ४ थान निबन्धसङ्ग्रह, २ थान व्यङ्ग्यसङ्ग्रह, सबै प्रकारका बालसाहित्यका गरी ७ थान कृति, झ्याउरे खण्डकाव्य १ थान र छोक तथा अन्य कृति गरी करिब ३० वटा जति कृतिहरू प्रकाशनका प्रशवमा छन् ।
अहिले म ती कृतिको सम्पादन र पुनर्लेखनमा व्यस्त रहेको छु । चाँडै नै ती कृतिहरू बाहिर आउने पनि छन् । २०६९ मै पाँच कृति बाहिर आउने भेउ प्रकाशकले दिएका छन् । हेरौँ के हुन्छन् ? ती कोही चित्र बनाउनमा गएका र कोही प्रेसमा गैसकेका छन् ।
अहिलेसम्म मेरा ‘कमिलाको ताँती’ नामक बालकवितासङ्ग्रह, ‘विद्यालय स्तरीय निबन्धहरू’ र ‘किस्ताको कम्प्युटर’ नामक बालकथासंग्रह गरी तीनवटा कृतिहरू प्रकाशित भएका छन् । ‘कमिलाको ताँती’ २०६० मा शिष्य नवीन केसीले र बाँकी दुईवटा कृतिहरू ‘विद्यालय स्तरीय निबन्धहरू’ र ‘किस्ताको कम्प्युटर’ क्रमशः २०६५ र २०६६ मा काठमाडौँस्थित विवेक सिर्जनशील प्रकाशनले प्रकाशित गरेको हो । ‘किस्ताको कम्प्युटर’ कथासङ्ग्रहमा परेको ‘डुसी बाछी र भाइटीका’ कथा कक्षा ५ को बोर्डिङ् स्कुलको कोर्समा पाठ्यपुस्तकमा छापिएको छ । त्यहाँ सो कथा नेपाली विषयमा पढाइ हुन्छ । अर्को ‘विद्यालय स्तरीय निबन्धहरू’ पनि मध्यमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सन्दर्भ सामग्रीमा चयन भएका छन् । यो मेरो लागि ज्यादै खुसीको कुरा हो ।
म अझै पनि केही न केही कृतिहरू रचना गरिरहेको छु । बाल साहित्यमा पनि मैले अघिल्लो वर्ष एउटा कथाको किताब लेखेको छु । बाल उपन्यासको पनि लेखनी भइरहेको छ । सकेँ भने म शिक्षकबाट रिटायर्ड नहुँदै सबै किताबहरू निकाल्छु । सकिनँ भने पनि दुईचार कृति म अवश्यै निकाल्छु । त्यसमा कविता, कथा, निबन्ध र उपन्यासचाहिँ पक्कै पर्छन् ।
३. साहित्य लेखन कहिलेदेखि भएको हो ? लेख्ने प्रेरणा कहाँबाट पाउनु भएको हो ?
उत्तरः मैले नजानीकन कक्षा ६ मा पढ्दादेखि नै साहित्य लेख्न थालेको हूँ । अलिअलि जानेर चाहिँ मैले कक्षा ८ देखि लेखेको रहेछु । झापामा भएको २०३६ सालको ‘सडक कविता क्रान्ति’ बाट मैले लेख्न सिकेको रहेछु । मेरा साहित्यिक गुरु यही नै भनेर त ठ्याक्कै छैनन् तर मैले भवानी घिमिरे, नकुल काजी, भरत भुर्तेल र अन्य झापाली कविकवयत्रीहरू ‘सडक कविता क्रान्ति’ मा लागेको देखेर कविता लेखेको रहेछु । सिकारू अवस्था पार गर्न र कवितामा आफ्नो निजी शैली निर्माण गर्न मलाई ठ्याम्मै पाँच वर्ष लाग्यो ।
कलेज जीवनमा मैले साथीभाइबाट पाएको प्रेरणाले मलाई धेरै काम गरेको थियो ।
४. राम्रो साहित्य लेख्नलाई के कुराको आवश्यकता पर्दो रहेछ ? नयाँ पुस्तालाई केही सन्देश केही छ कि ?
उत्तरः साहित्य राम्रो र कालजयी लेख्नु पर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु । समकालीन साहित्यले मानिसको तात्कालिक मानसिकतालाई छोला तर कालक्रमिक कृति लेख्न सकियो भने एउटै कृतिबाट लेखक अजर अमर हुन्छ । लेखनमा सबैभन्दा ठूलो अभीष्टताको खोजी भनेकै त्यो अमरत्व हो । जसले इतिहासको प्रचुर अध्ययन, चिन्तन र मनन गर्दैन त्यसले केही पनि लेख्न सक्दैन । अनि समकालीन साहित्यको पनि तुलनात्मक र गहिरो विश्लेषणमूलक अध्ययन गर्नुपर्छ । ममा त्यो चेत करिब चालिसको दसकदेखि नै पलाएको हो । मैले नेपाली, हिन्दी, उर्दू, बंगाली र अङ्ग्रेजीका केही नाम चलेका कृतिहरू विद्यार्थी कालमै पढिसकेको हूँ । त्यसैले कहाँ, कस्तो र कसरी पढ्ने भन्ने ज्ञान मलाई छ । तर म आख्यान बढी पढ्ने गर्छु ।
अचेल नेपाली साहित्यमा आख्यानका तुलनमा अनाख्यान कृति निकैै निस्कन लागेकाले सो पनि हामीले पढ्नु आवश्यक छ । कालजयी लेख्न सकियो भने त्यो राम्रो तर पछिल्लो रचना या कृतिलाई टपेर लेख्न मन लागिरहन्छ त्यसैले मेरो लेखनको अन्त्य भैसकेको छैन । पछिल्लो समयमा म भूमिकामा बढी आएको छु । शिक्षण र प्रशिक्षण पेसाले गर्दा अति व्यस्त भइन्छ । त्यसैले भनेजस्तो गरी लेख्न पाइएको छैन । तर पनि म लेखिरहेको छु । पढिरहेको छु । चर्चा र विवाद्मा आएका सबै नेपाली साहित्यका पुस्तक म पढिरहन्छु । त्यो मेरो सोखको विषय पनि हो । दिनहुँ केही न केही नपढी नसुत्ने मेरो बानी अहिले संसारलाई बुझ्न र विश्लेषण गर्न कामयाब भएको छ ।
नयाँ भाइबहिनीलाई पनि अध्ययनमा प्रचुरता आएपछि मात्रै कलम चलाउने सल्लाह दिन चाहन्छु ।
५. यहाँसम्म आइपुग्दा बास्तवमा जिन्दगी के रहेछ ?
उत्तरः एक शब्दमा भन्दा ‘भ्रम’ । यो जिन्दगी मलाई त बोर र फोहोर लागेको छ । आनन्दका लागि संसारमा धेरै कामहरू भए पनि मैले कविता लेखेर जति आनन्द पाएँ त्यो अरू कुनै कुरामा पनि पाइन । कहिलेकाहीँको कविता लेखन र सेक्सको आनन्द उस्तैउस्तै लाग्छ –मलाई । तर म तयारी गरेर र योजना बनाएर कविता लेख्ने कवि भने होइन है ! मुडी कवि हूँ । कहिले लेखेको लेख्यै गर्छु । कहिले छ महिना वर्षदिन पनि लेख्दिनँ । पछिल्लो समयमा म छोटाछोटा प्रेम विषयक कविताको लेखनमा मस्त छु । मैले यो जुनीमा कविताका माध्यमबाट मेरो समाजलाई केही दिन सकेँ भने म मेरो जीवनलाई सफल भएको ठान्ने थिएँ ।
समग्रमा, भन्दा म मेरो सिर्जनात्मक जीवनबाट सन्तुष्ट छैन । हुन्न पनि । जीवनको शिक्षण पाटोका बारेमा अहिले नभनौं । त्यो बेग्लै छ ।
६. संसारमा यतिका मानिसले साहित्य लेखिरहेका छन् ? तपाईँले नै साहित्य लेख्नुको कारण के होला ?
उत्तर ः बडो मजाको प्रश्न सोध्नुभयो । संसारमा यतिका मानिसहरू बाँचिरहेका छन् तपाईंले नै किन बाँच्नु प¥यो भन्ने प्रश्न पनि त उब्जिन सक्छ । हो, अरूले अरूको एङ्गलले लेख्ने हो । मैलेचाहिँ मेरो एङ्गलले लेख्ने हो । म स्वच्छन्दतावादी भाव धारामा बहेर लेख्ने साहित्यकार हूँ । सोझो लेख्यो नारा हुने, धेरै घुमाउरो लेख्यो कहिले त्यो अमूर्त हुने अनि कहिले आयामेली हुने । म ती दुवैको विरोधी हूँ । जीवनलाई बुझिने खालका रचनाले सम्बोधन गर्नुपर्छ । आफूले लेखेको अरूले त परै जाओस् आफू नै नबुझ्ने मानिसहरू पनि छन् । त्यो पनि राम्रो भएन । आफूले लेखेको अरूले नारा भनी गाली गर्नेहरू पनि छन् । त्यो पनि भएन । यो लेखन भनेको चाहिँ ठिक्कको हुनुपर्दो रहेछ । चियामा लागेको चिनीजस्तै वा तरकारीमा हालेको नुनजस्तै । बढी भए पनि गाह्रो कम भए पनि खल्लो ।
७. धेरै नेपाली लेखकहरूको ‘गरिब छु, अभाव छ, यो छैन, त्यो छैन’ भनेर लल्लरी गाउँने शैली यहाँलाई कस्तो लाग्छ ?
उत्तर ः हो, मलाई राम्रो लाग्दैन किनकि म त्यो कुराको सख्त विरोधी हूँ । नेपालमा पत्रकारिता गरेर पेसा लेखन बनाएको छ भने देखिबाहेक लेखेर आफू र आफ्नो परिवार पाल्न सक्ने अवस्था आएकै छैन । नेपालका अधिकांश लेखकहरू जो नाम र दाम कमाएका छन् ती कुस्त गाँठ कमाउछन् । राम्रो लेख्ने र सडक पेटीको बास भएका एक जना पनि साहित्यकार छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । जो लालीको पित्र गाएर हिँड्छन् ती लोभी हुन् । पापी हुन् । आखिर ती पनि मर्छन् । मरेर जाँदा ती केही पनि लाँदैनन् । म पनि लेखेर बाँचेको छैन । जीवन बाँच्ने मेरो पनि पेसा छ । तपाईंको पनि छ । यस्तो स्थितिमा ढाँट्नै नमिल्ने परिस्थितिलाई ‘ओपन सेक्रेट’ भनिन्छ भने किन ढाँट्ने ? हैन त । अनि अर्को पाटो नेपालमा फुल टायम लेख्ने लेखकहरू धेरै कम छन् । जो छन् ती माहिर छन् –लेखनमा । जमेका छन् । कमाएका छन् । अनि किन तिनीहरूले गरिबीको गीता गाउँदै हिँड्नु ।
८. लेखेर कतिको पारिश्रमिक पाउनु भएको छ त यहाँले ?
उत्तर ः म त सानोतिनो लेखक हूँ । यिने गिनेको लेखक हैन । मलाई पहिले त पढ्न मन लाग्छ । पढेपछि विचारले झिँगल्छ अनि लेख्ने हो । मलाई पढेर र लेखेर कुन बढी आनन्द आउँछ भन्यो भने म भुलिन्छु होला । खै ! कहिले पढ्दा आनन्द । कहिले लेख्दा आनन्द । त्यो पढिने र लेखिने विषयवस्तु र परिवेशका कुरा हुन् । म पत्रिका चाहिँ भेटेजति पढ्छु तर पुस्तक चाहिँ छानेर पढ्छु । मैले पढेका राम्रा थिम भएका पुस्तक छन् भने म आफूभन्दा जुनियरलाई ती पढ्न सिफारिस पनि गर्छु ।
जहाँसम्म पारिश्रमिकको कुरा छ । त्यो मैले पारिश्रमिकबाट ठूलोठूलो काम गरेकै छैन । विद्यालयस्तरीय निबन्धहरूबाट एकमुष्ट बीस हजार पाउँदा मलाई २०६५ तिर केके न पाएजस्तो भएको थियो । अब त त्यो पनि छैन । म अहिले आफूले पाएको परिश्रमिकबाट राम्रा पुस्तकहरू किन्ने गर्छु । मजाले पढ्छु । सुका आठआना पारिश्रमिकले मानिसको जीवन चल्ने भए किन यसरी पेसामा घिसिपिटी हुनु प¥थ्यो होला र ?
९. लेखेर अघाउनु भएको छैन ? कि अझै लेख्ने लोभ छ ?
उत्तर ः आम्मै के भन्नु भएको । जीवन जिएर पनि कोही अघाउँछ । हा,े त्यस्तै हो लेखन भनेको पनि । पछिल्लोपटक लेखेको रचनालाई उछिनेर लेख्ने भोक सबैजसो लेखकमा हुन्छ । हा,े मलाई पनि त्यही हुन्छ । त्यसैले म कसैसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्दिनँ । मेरो प्रतिस्पर्धा मसँगै हुन्छ । मेरा रचनासँगै हुन्छन् । मलाई हातखुट्टा चलुन्जेल र दिमागले काम गरून्जेल लेखिरहने इच्छा छ । म लेख्दालेख्दै र कल्पना गर्दागर्दै मर्न चाहन्छु । मलाई सिर्जनात्मक कार्यमा रिटायर्ड हुनै मन लाग्दैन ।
१०. अन्त्यमा, केही भन्न चाहनु हुन्छ कि ?
उत्तर ः अन्तर्वार्ता लिएर मनमा भएका हुँडलाहरूलाई शान्त पार्ने अवसर दिनु भयो । सारै खुसी लाग्यो । कहिलेकाहीँ लेखकलाई म पनि प्रश्नका बाँणले गिजोल्छु । आज तपाईँले मलाई त्यसैगरी गिजोल्नु भयो । अब ममा पनि लेख्ने ऊर्जा पलाउने छ । यस्ता वार्ता र संवार्ताले कहिलेकाहीँ प्वाक्क इतिहास पनि बोल्छन् । म त सारै खुसी हुन्छु । आज सारै मजा लाग्यो । त्यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा सम्पादकज्यूलाई मुरीमुरी हार्दिक धन्यवाद छ । फेरि फेरि पनि आउनोस् न बसेर यस्तै वार्ता गरौं र मनलाई हलुङ्गो बनाऊँ ।
विधा: काव्य वार्ता | प्रतिक्रिया छैन »